कमिसनको रशाकसिमा प्रदेस २ माथि धब्बा
प्रकाशित मितिः माघ १, २०७५
१२९४ पटक पढिएको
माघ १ गते । प्रदेश न. २ को उधोग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय जनकपुरधामले गैर सरकार संस्था मार्फत संचालन गर्ने गरिवी निवारणका लागि उधम विकास कार्यक्रमको प्रारम्भिक छनौट प्रक्रियामा व्यापका पैसाको चलखेल गरी सूचि प्रकाशन गरेको खुलासा भएको छ । कार्यक्रमका लागि प्रदेश न. २ को ८ जिल्लाबाट १९३ वटा गैर सरकारी संस्थाहरुले आफनो आशयपत्र बुझाएको थियो । जस मध्ये प्रारम्भिक छनौटको सूचिमा ४० वटा संस्था परेका छन् । सर्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली ,२०६४ र गरिवी निवरणका लागि लघु उधम विकास कार्यक्र सञ्चालन निर्देशिका,२०७० एंव आशयपत्र छनौटका लागि तयार गरिएको कार्यक्षेत्रगत शर्त तथा संस्था छनौटका आधार बमोजिम निर्धारित मापदण्ड पुगेको आशयपत्रहरुको मूल्या¨न गरी सबेभन्दा बढी अê प्राप्त गर्ने आशयपत्रहरु मध्येबाट छनौट गरीएको सूचना भन्दा फरक लाखैँ पैसाको लेनदेनमा संस्था छनौट गरीएका छन् । उधोग, पर्यटन, वन तथा वातावारण सचिव विधनाथ झा र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिच भएको विवादबाट संस्था छनौट प्रक्रिया पैसाको लेनदेनमा भएको स्पष्ट देखिन्छ । छनौट प्रक्रियाबाट प्राप्त गरेको अंêको आधारमा छनैट गरीएको भनी पनि सचिव र मन्त्री वचिको जुवारी पैसा लेनदेनको विषय प्रामाणि भएको छ । सचिव बिधानाथ झाले आफनो फेस बुकमा लेखेको अनुसार मन्त्री जी ले मलाई बोलाई मेरो सिफारीसको संस्थालाई किन भएन पैसा तेरो बाउले तिर्छ भन्ने भनाईले पैसको लेनदेन विषयलाई स्पष्ट परेको छ । सभामुख सरोज यादबले पनि रेडियो सल्लहेशको कार्यक्रम सबेरे सबेरेमा स्पष्ट भनेको छ कि पैसाको विषयमा मन्त्री र सचिव बिच विवाद भएको छ । गैर सरकारी संस्थालाई कार्यक्रमका लागि प्रारम्भिक छनौट सूचिमा राखेको वापत मोटो रकम लेनदेन भएको छ । यसै विषयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा हिजो बेलुका तिन बजे मन्त्री र सचिव विच विवाद भएको थियो । यस विवाद विषयलाई छानभिन्नका लागि कानून मन्त्री ज्ञनेन्द्र यादबको संयोजकत्वमा तिन जनाका समिति बनाईएका छन् । यस छान्नभिन्न समितिले मात्र विवाद होइन प्रारम्भिक छनौटमा भएको अनियमितता बारे सत्य तथ्य अनुसन्धान गरी दोषिलाई प्रदेश न.२ को सरकारले काडाकरवाही गर्न पर्छ । हाल सम्म विवादको कारण दुईवटा पक्ष मात्र देखिएपनि भित्र अरु पनि रहेको स्पष्ट देखिन्छ । यस प्रारम्भिक छनौटमा पैसा लेनदेनबाट अंê बटुलेको गैर सरकारी संस्थाहरुलाई कोलो सूचिमा राखी करवाही गर्नु पर्छ । कार्यक्रमको लागि मन्त्री र सचिव विचको विवादले प्रदेश न. २ को सरकार भ्रष्टाचारमा अगाडी उन्मुख देखिन्छ । यो भन्दा अगाडी कृषिको बालि वितरण प्रत्रित्यामा पनि यस्तै गन्ध आएको थियो । त्यसै गरी सामाजिक कल्याण मन्त्रालयले उधम विकासका लागि तालिम संचालन कार्यक्रम पनि प्रमुख कार्यक्रम जनकपुरमा मात्र राखी आफना नजदिकका संस्थालाई कार्यक्रम दिनु भाष्टाचार र जनकपुरलाई फेरी सिंहदबार जस्तै शक्रिशाली बनाउने प्रयास भईरहेको छ । जनतालाई घटनाको सत्य तथ्य सर्वजनिक गरी दोषि उपर कराकरवाही गरी भ्रष्टाचारलाई प्रदेश न.२ निर्मुल पार्नु पर्छ ।